အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:သူထွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၁၅:၅၅၊ ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Regarding with your sandbox writing, Wikipedia is an encyclopedic reference, not an instruction manual, guidebook, or textbook. While Wikipedia has descriptions of people, places and things, an article should not read likea"how-to" style owner's manual, cookbook, advice column (legal, medical or otherwise) or suggestion box. This includes tutorials, instruction manuals, game guides, and recipes. Describing to the reader how people or things use or do something is encyclopedic; instructing the reader in the imperative mood about how to use or do something is not. Such guides may be welcome at Wikibooks instead. Ninja✮Strikers «☎» ၀၉:၁၁၊ ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဆွေးနွေးနေစဉ်ကာလအတွင်း အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဆောင်းပါးအား တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ဆောင်းပါးစာမျက်နှာထိပ်ဆုံးရှိ ဖျက်ပစ်ရန် အသိပေးချက်အား မဖယ်ရှားပါနှင့်။ ပိုမိုသိရှိဖို့ ဝီကီပီးဒီးယားက ဘာမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတဲ့ မူဝါဒကို ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ရှုပေးပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၅:၄၄၊ ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၇ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မင်္ဂလာပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ သင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မိတ္ထီလာ)တွင် သင်ပြုလုပ်ခဲ့သော တည်းဖြတ်မှုကဲ့သို့ ဆောင်းပါးများတွင် သင့် လက်မှတ်ကို ထည့်သွင်းခဲ့တာကို သတိထားလိုက်မိပါတယ်။ ဒါဟာ မှားလေ့ရှိသော အမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရဲ့ တည်းဖြတ်မှု ရာဇဝင်ဟာ ဆောင်ရွက်ချက်များ မှတ်တမ်းအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာများထဲက သင့်တည်းဖြတ်မှုများမှာ ကျေးဇူးပြု၍ လက်မှတ်မထည့်ပါနဲ့။ ဆောင်းပါးရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာ သို့ Wikipedia:လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လိုမျိုး ပရောဂျက် စာမျက်နှာတွေမှာ လက်မှတ်ထည့်ခြင်းဖြင့် ဆွေးနွေးချက်တွေကို ဖတ်ရှုရ လွယ်ကူစေမှာပါ။ နောက်ထပ် သိရှိလိုပါက သို့မဟုတ် စာမျက်နှာအမျိုးအစားများ ခွဲခြားသိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆောင်းပါးတစ်ခုဆိုတာ ဘာလဲ?မှာ ဖတ်ရှုပေးပါ။ သင့်ဆောင်ရွက်ချက်တွေအတွက် ထပ်မံကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဝီကီမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၈:၁၇၊ ၂၉ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မင်္ဂလာပါ အစ်ကိုရေ။ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားမှာ ဝင်ရောက်ရေးသားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ပအိုဝ်းဘာသာစကားအရ ပအိုဝ်ႏ လို့ အရေးရှိပေမယ့် မြန်မာ(ဗမာ) ဘာသာစကားနဲ့ ကွန်ပျူတာလက်ကွက်မှာ ဝ်ႏ သင်္ကေတ မရှိသလို ပအိုဝ်း လို့ပဲ ရေးသားရပြီး မြန်မာဘာသာနဲ့ တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ကလဲ ပအိုဝ်း ဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ - စာ ၁၇) ဆောင်းပါးတွေထဲက ဒေသခေါ်အမည်မှာ ပအိုဝ်းလို တစ်ကြိမ် ထည့်သွင်းရေးသားထားရုံနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ခေါင်းစဉ်ကြီးက အစ ပအိုဝ်ႏ လို့ ပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာစာပဲ ရိုက်တဲ့သူတွေမှာ အခက်အခဲရှိသလို ဆောင်းပါးချိတ်ဆက်ရာမှာလဲ အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ စာလုံးအမှားပြင်ဆင်ပေးလိုတဲ့ ဆန္ဒကို သဘောပေါက်ပေမယ့် မြန်မာဘာသာစကား ဝီကီပီးဒီးယား ဖြစ်တဲ့အတွက် နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်။ မြန်မာဘာသာ လက်ကွက်သီးသန့်နဲ့ ရိုက်လို့မရတဲ့ သင်္ကေတ ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၉:၃၁၊ ၂၇ မေ ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:သူထွန်း&oldid=401930" မှ ရယူရန်